May Nyane: ခင်နန်းငယ်၏မေမေ
ခံစားလိုက်ရပါတယ်.. ဆရာမ ။ ကျွန်တော်လည်းမိဘ (အဖေ) နှင့်ပြဿနာတွေရှိတယ် ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်ပညာရေးပေါ့ ။ ကျွန်တော် Singapore ကိုမလာချင်ဘူး အဖေအတင်းအနိုင်ကျင့် ပို့လို့ရောက်ခဲ့ရတာ။ သူ့ဘက်ကလည်းသူ့အတွေးနဲ့သူမှန်မယ် ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပေးဆပ် (ဆုံးရှုံး) ရတာ မနည်းပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက် ၊ နောက် ချစ်ရတဲ့သူ (:D) ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု ၊ နောက်တော့ လည်းအဖေ့ရဲ့ကောင်းစေချင်စိတ် ၊ မိဘမေတ္တာ (အတ္တ) ကိုလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်သွားပါပြီ။
ကိုအောင်ဖြိုးရေ.. ဒီနေရာမှာတခုရှိတာက မိဘတွေက သားသမီးအပေါ် အနိုင်ကျင့်သလိုဖြစ်တာတော့ မှန်တယ်.. ဒါပေမဲ့ သေချာတာက အဲဒီအနိုင်ကျင့်မှုက မှန်ကန်တဲ့စေတနာပါ မပါဆိုတာကိုတော့ သားသမီးက နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ ခု ကိုအောင်ဖြိုး မိဘကို နားလည်သလိုပေါ့။ မိဘစကားနားထောင်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမ တပည့်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖူးတယ်။ အဲဒီမှာ တယောက်က ပြောဖူးတယ်။ မိဘစကားနားထောင် သိဒ္ဓတ္ထတောင် ဘုရားဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အမက ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဘုရားဆိုတာ တော်ရု့လူမဖြစ်တဲ့အရာ..တော်ရုံလူနားမလည်နိုင်တဲ့အရာ။ ဒါကြောင့် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးတို့က နားမလည်နိုင်တာ။ဒါပေမဲ့ သိဒ္ဓတ္ထက မိဘစကားနားထောင်ရင် ဘုရားမဖြစ်တောင်မှ ဘုရင်တော့ ဖြစ်တယ်လို့။ ခု ကိုအောင်ဖြိုးမိဘတွေကတော့ မမှားဘူးထင်တယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူဟာ ဘ၀အာမခံချက်ရှိတဲ့နေရာ။ကိုယ့်တိုင်းပြည်က သင်စရာပညာတောင်မရှိတဲ့အရပ်။ ပြီးတော့ တိုင်းတပါးမှာ တယောက်တည်း ရပ်တည်ရတာကလည်း confidence ရစေတာပဲ။ ချစ်ရတဲ့သူကိုလည်း ခဏပဲ ခွဲခဲ့ရတာပါ.. နောင်တချိန် အောင်မြင်တဲ့ အနာဂတ်မှာ အတူ ပျော်ခွင့်ရဖို့ဆိုပါတော့။ အမတောင် အနာဂတ်အတွက် ခဏခွဲရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြောင်း လုံးချင်းတအုပ်ရေးဖူးသေးတယ်။'ချစ်သူတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်'တဲ့။ အဲလိုသာတွေးထားပါနော်..။
ဆရာမ အရမ်းကောင်းတာပဲ..ဒါပေမဲ့ ဆရာမ ကိုဇော်ဖက်က veiw မပါဘူးနော်..မိန်းမတယောက်ကအတ္တဆန်စွာ သာသမီးအပေါ်ပဲ ဂရုစိုက်နေရင် ခင်ပွန်းတွေက သိပ်မကြိုက်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုဖတ်ဘူးထားတော့လေ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီထဲက ခင်နန်းမြိုင် ကံကောင်းပါတယ်..ကျနော်လဲ ချုပ်ချယ်တဲ့မိဘတွေကြားမှာကြီးပျင်းခဲ့ဘူးတော့အဲလိုမျိုးဖန်တီးချင်ခဲ့တာ..ဆရာမ ဟဲဟဲ..
လုပါပါဦးဆရာမ.. ချစ်သူတို့ရဲ့ မနက်ဖြန်လေး..
ကျေှးဇူးပါပဲ ။ ဆရာမရဲ့ Comments တွေ အတွက်ရော ၊ ခုတလောမပြတ်တင်ပေးနေတဲ့ ၀တ္တုတိုတွေအတွက်ရောပေါ့ ။ တတ်နိုင်ရင်လေ ဆရာမရဲ့ စာစုစာရင်းလေးလုပ်ပြီးတင်ထားပေးပါ့ လား။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခု အနေနဲ့ အရေးပါတယ်လို့ထင်မိလို့ပါ။
သည်နေ့စာကြမ်းပိုး အမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို (သူကဆရာမ တပည့်ပါ) တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာမ Popular ဖြစ်ကြောင်းကြားလိုက်ရသေးတယ်။ ဆရာမကအတော်ငယ်သေးတယ်ဆိုတာရော ၊ အကျီလက်ရှည်အမြဲဝတ်ပြီး စာသင်ရင်ဆံပင်ကိုအမြဲစည်းထား တတ်တယ်ဆိုတာကိုရော၊ နောက်နားချိန်ရောက်ရင်ဆံပင်ကို ဖြန့်ချထားတတ်ပြီး အဲဒီကျရင်ကျောင်းသားတွေကချောင်းတောင် ကြည့်ကြရတယ်ဆိုတာကိုရောပဲ ။ (ကျွန်တော်ကို စပ်စုတယ်ထင်လားမသိ ၊ ကျွန်တော်ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ၊လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ Personality ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ )
သမုဒယနွယ်.. ၀တ္ထုအရတော့ ကိုဇော်က ခပ်အေးအေးသမားပါပဲ၊ ပြီးတော့ ခင်နန်းမြိုင်လုပ်နေတာတွေက လင်သားဘက်က ကန့်ကွက်လောက်စရာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ..နော်၊ လုံးချင်းဝတ္ထုတွေတော့ တင်ပေးနိုငမှာမဟုတ်၊ ၀တ္ထုတိုတွေတောင် ပြန်မရိုက်နိုငလို့ အကုန်တင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အားပေးတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးပါနော်၊
ကိုအောင်ဖြိုးရေ.. ကိုယ့်အကြောင်းပြောတာဆိုတော့ ပြန်ပြောစရာစကားမရှိ၊ အမထင်တာတော့ အမတပည့်ဟောင်းဆိုရင်.. အမကို ဟော့ရှော့လို့ပြောမှာပဲ..ဟုတ်တယ်မို့လား..ဟဲဟဲ.. ပြီးတော့ မြန်မာစာဆရာမနဲ့လည်း မတူဘူးလို့ကော မပြောဘူးလားဟင်..:D
Thanks for the post. Its exactly how i feeling about my daughter..
:P I want her to beagood dancer, i want her to beanational swimmer,i want her to beagood writer. I want her to beahot , sexi and beautiful girl. I m trying my best to get my doll ( the perfect doll )of my own. It is true that i m not fair, but i am living in this crazy world only for her.